Intombi ena 28 yadibana nendoda ngo 2011, wamitha futhi wafumanisa uba uHIV. Wafumanisa uba iya cheater indoda yakhe nabantu abaninzi, futhi uthandana nosister womfazi wakhe owaswelekayo.
Ingxaki anayo ngoku ubyfriend akamondli umntana since 2013.
Intwazana ena 23years ifumanise uba iboyfriend iyacheater banomntwana omncinci, ubhuti akamondli umntana,
Usisi usamthanda ubhuti kakhulu kodwa uyafuna nokumyeka. Into emkhathazayo kukuba usisi wayeyi Virgin
Xa edibana nobhuti
Umfana omncinci ubethwa ngumama wabantwna bakhe, imqhwaba ngeempama ifune ukumhlaba ngemela, iymakrwitsha zonke ezi zinto izenza phambi kwabantwana.
Ngoku uhlukekene naye but intombi ayifuni abone abantwana, uthi if uyobabona mhla babuyelana.
Usisi uxhazwe sisthandwa sakhe, emotionally, physically and spiritually wade wafuna ukuzibulala.
Umphefumlo wakhe udandathekile kakhulu, uhlala ekhala yonke imihla, ngoku ucela amancedo
Aqhubelke nobomi bakhe kuba selehlukene nalosisi ebethandana naye qha usaxhelekile emphefumlweni
Usisi otshatileyo obehlutshwa yindoda yakhe imjolela, imbetha since 2014, ngoku usisi incame wamshiya umyeni wakhe
but ingxaki yakhe bubudlelwane phakathi kwakhe nefamily yakhe, abukho buhle kuba ngoko ebebethwa ngumyeni, ebebalekela kuyo,
kodwa avele abuyele endodeni ifamily engayxelelanga okanye indoda ingaxolisanga. Futhi ke ngoku umyeni akabondli abantwana babo ababini.
umama utshatile enabantwana ababini nomyeni naye unabantwana ababini, ingxaki ngoku umyeni ufuna bayohlala kowabo emakhaya kodwa babenze isigqibo esithi bazozihlalela kowabo umzi xa betshatile, usisi woyikisela abantwana bakhe uba abazoba comfortable ukuyohlala kulomyeni..uxakiwe ngoku uba enze njani?
intombi ena25years ithandana neboyfriend then ngoku umfana ufuna untshato, utata wentombi akavumi kanti engafuni Nje uyazi uba unomntwana nomakazi womfana yaye yonke lento ayaziwa ngumama wentombi...intombi iyabuza uba ithini kuba iyafuna utshata yona
Ubhuti ujolelwa ngumntu wakhe, ebeyolobola ngoDec. Usamthanda usisi kakhulu qha usisi akasekho uyazijolela. Umthanda njani umtnu ongakuthandiyo / ojolayo ?
Myeni wam endiphethe kakubi endibetha .ndingafunwa nangomnye umntu yena asuke Abe kucala labazali bakhe . Sinabantwana ababini mna naye .m so hurt wandishiya wayohlala kowabo kuthe xandiyomlanda ndathukwa ndagxothwa ngomamakhe
Intombazana encinci edlwengulwe ngumelwana ena 6yrs de wabana 12. Waphinda xa ena 13 yrs wadlwengulwa ngabafana abayi 7. Ugcina abantwana baka sister wakhe abathathu. Usister akasekho abanalo nekhaya
Usisi uxhatshazwa yi Fiance yakhe , iyambetha ,ikhwela phezu kwakhe ngenyawo, umrhuqa nge moto,
Imbethe abe bokoboko, wade usisi wacela itransfer but ubhuti waya apha wayombetha futhi.
25 May Ngokhuseleko lwabantwana emakhayeni ngelixesha le Covid-19
21 Jun Sensei Nkululeko Schreech- Judo Legend
21 Sep Sincokola nekhwahla uThembinkosi "Phekeza" Henna